TPS အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ | ငါ၏အ TPS ကုန်ဆုံးလျှင်ငါသည်အဘယ်သို့ပြုနိုင်သည်? | USAHello
TPS အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ - သင့် TPS ကုန်ဆုံးတဲ့အခါသင်အဘယ်သို့ပြုနိုင်?
ဤတွင် TPS အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်အယ်လ်ဆာဗေးဒေါမှလူအဘို့ဖြစ်၏.
ဓာတ်ပုံ: WBUR သတင်းများ
TPS အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ – ငါ၏အ TPS တဲ့အခါမှာသက်တမ်းကုန်ဆုံးပါဘူး?
Update ကိုနိုဝင်ဘာလ 4, 2019: TPS for El Salvador has been extended.
The US government publishedanotice in the Federal Register. The notice says that TPS for El Salvador, ဟေတီ, နီကာရာဂွာ, ဆူဒန်, Honduras and Nepal is extended until TPS court cases have been settled. If you have TPS for El Salvador, your TPS documents are automatically extended to January 4, 2021.
The notice says that the extension is automatic. ယင်းအပေါ်ထပ်မံမွမ်းမံမှုများအဘို့အကွညျ့ရှု USCIS အယ်လ်ဆာဗေးဒေါသတင်းအချက်အလက်စာမျက်နှာ.
ယာယီကာကွယ်ထား status ကိုအတူအများစုကအယ်လ်ဆာဗေးဒေါဥပဒေရေးရာခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ရောက်ရှိ. သင်သည်မည်သည့်ဥပဒေရေးရာ status ကိုမပါဘဲနေဖို့လိုလျှင်, သငျသညျကိုဖမ်းဆီးနှင့် / သို့မဟုတ်ပြည်နှင်ဒဏ်ပေးခံရမည့်အန္တရာယ်ပါလိမ့်မယ်.
အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ၏အစိုးရသည်မကြာသေးမီကကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည် ကာတာနိုင်ငံနှင့်အတူညှိနှိုင်း အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကနေနှင်ထုတ်ခံရအယ်လ်ဆာဗေးဒေါလကျခံဖို့, အသက်ရှင်ပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံအတွင်းရှိယာယီအလုပ်လုပ်သူတို့ကိုခွင့်ပြု. ဘိုလီးဗီးယားလည်းပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါသည် အကြားတစ်ဦးပြိုင်ဘက်အဖြစ် နိုင်ငံပေါင်းတစ်အကွာအဝေး ထည့်သွင်းစဉ်းစားအောက်တွင်အယ်လ်ဆာဗေးဒေါလက်ခံရရှိရန်.
သံရုံး၏လိပ်စာဖြစ်ပါသည် 1400 16လမ်းကဘ Suite ကြိမ်မြောက် 100, ဝါရှင်တန်ဒီစီ 20036.